बिराटनगरको पुन:जागरण | गृहपृष्ठ
Home अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट) बिराटनगरको पुन:जागरण
on: July 13, 2018 अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै विकासको आधार
प्रदेश नं १ सरकारका प्रमुख सचिव
विराटनगरमा पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । ठूला ठूला होटल, महलहरूको स्थापना भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै विराटनगरको औद्योगिक विकासबारे उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानले सरकार, निजीक्षेत्र र सहकारीमार्फत संयुक्तरूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, किन अपेक्षित रूपमा विकास हुुन सकेन ? कर्णाली अञ्चलको तुलनामा विराटनगर विकासमा अगाडि छ । दृष्टिकोण, मनोवृत्ति, विचार र चरित्रले विकासको बाटो पहिल्याउँछ । अल्पकालीन राजनीतिक अवस्थाले विकासलाई त्यो रूपमा लैजान सकेन । स्थिर सरकार बनेको छ । यसले स्थिर काम गर्छ भन्ने आशामा छौं । स्थानीय, सङ्घ र प्रदेशको साझेदारीमा काम गरे विकास हुने देखिन्छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र भौगौलिक रूपमा आएको सकारात्मक परिवर्तन नै विकास हो । त्यसैले यी क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन गराउँदै लैजानुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र गरीबीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ, जसले विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ ।
१ वर्षको तलबभत्ता सामुदायिक विद्यालयलाई
विराटनगरको पुनरुत्थानका लागि महानगरले शिक्षा र अन्य भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । महानगरमा निर्वाचित भइसकेपछि गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सडकलाई खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाउने, मोतियाबिन्दुका बिरामीको निःशुल्क उपचार र वृद्धभत्ता वितरण सहज बनाएका छौं । मैले यो १ वर्षको तलबभत्ता यहाँका चारओटा सामुदायिक विद्यालयलाई दिने घोषणा गरेको छु ।
भौतिक पूर्वाधारको विकासमा महानगरले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएको छ । यसको निर्माणपछि सञ्चारकर्मीहरूले एकै थलोबाट सबै आधुनिक सेवा प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै, २५ सय जना अट्नेगरी विराटनगर १९ मा अन्तरराष्ट्रियस्तरको सभाहल बनाइनेछ । यसको डीपीआरका लागि यस आर्थिक वर्ष ३५ करोड छुट्ट्याइएको छ ।
यस क्षेत्रको मुख्य पहिचान बोकेको ऐतिहासिक विराट राजाको दरबारको पुनर्निर्माण गरी विश्वभरका पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य महानगरले राखेको छ । यसका लागि १ अर्बको योजना तयार पारिएको छ । रोजगारी सृजना गर्न महानगरले प्राविधिक शिक्षा र शीप सिकाइलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
ऐतिहासिकता बोकेको विराटनगर जुट मिल तत्काल शुरू गर्नुपर्नेछ । लामो समयदेखि यहाँका उद्योगीले माग गरिरहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) तत्काल स्थापना गर्नुपर्नेमा महानगरले जोड दिएको छ । सुनसरी मोरङमा रहेको साल्ट ट्रेडिङको नाममा रहेको ३ सय १२ बिगाहा जमीन सेजका लागि छुट्ट्याउन फाइल अर्थ मन्त्रालयमा राकिएको छ । त्यो फाइल तत्काल अघि बढाउन पनि म माग गर्दछु । निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यविना अबको समृद्धि सम्भव छैन । यसका लागि स्थानीय सरकार निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार छ ।
सुगर मिलको ६ सय बिगाहामा सेज बनाउनुपर्छ
अध्यक्ष, मोरङ व्यापार सङ्घ
विराटनगर अझै पनि अगाडि नबढ्नु धेरै दुःखद छ । विराटनगरले धेरै प्रधानमन्त्री दिए पनि यहाँको विकास हुन नसक्नुलाई विडम्बना भन्नुपर्छ । यति पुरानो इतिहास रहेको यो शहरको विकासमा अब ढिला गर्ने बेला छैन । विराटनगरका उद्योगीहरूले भैरहवा, बुटवल, नेपालगञ्जलगायत क्षेत्रमा समेत उद्योग खोल्नुपर्छ । हामीले सरकारलाई औद्योगिक कोरिडोर र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्न धेरैपटक आग्रह गरेका छौं । मोरङ सुगर मिलको ६ सय बिगाहा जग्गालाई सेज बनाउन बारम्बार प्रस्ताव गरिए पनि सुनुवाइ भएन ।
भौतिक संरचना बन्न नसक्दा १५ हजार विद्यार्थी पढ्ने क्षमता भएको मोरङ क्याम्पसमा अहिले २ हजार ५ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । शिक्षामा पहुँच बढाउन क्याम्पसको गुणस्तरमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । आज विराटनगर मेडिकल हब बनिसकेको छ । सरकारले आम मानिसको स्वास्थ्यमा पहुँच पु¥याउन गुणस्तरीय अस्पतालको खाँचो छ । कोशी अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ ।
विराटनगर औद्योगिक र आर्थिक हब हो । विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय मात्र नभै अन्तरराष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाइनुपर्छ । यहाँबाट दिल्ली, कलकत्ता, बङ्गलादेशजस्ता गन्तव्यमा उडान हुने हो भने यहाँको व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने थियो । सरकारले कृषि बीमाको व्यवस्था गरिदिए कृषिमा आत्मनिर्भर हुन मद्दत पुग्थ्यो । विकास निर्माणका काममा सरकारले पारदर्शी काम गर्न सकेको छैन । राजस्वको दर बढाउँदैमा बढी राजस्व उठ्दैन ।
किमाथाङ्कालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउनुपर्छ
अध्यक्ष, उद्योग सङ्गठन मोरङ
निजीक्षेत्रलाई विश्वास नगर्ने र साथमा लिएर अघि नबढ्ने हो भने देशले समृद्धिको सपना पूरा गर्न सक्दैन । अहिले सङ्घीय र स्थानीय सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको निर्धारण गर्ने भनेर बजेट भाषणमा समावेश गरेको कुरालाई हामी स्वागत गर्छांै । औद्योगिक क्षेत्र निर्धारण, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को कार्यान्वयन अघि बढाएमा औद्योगिक विकास हुन सक्छ । अहिले विद्युत्को ठूलो सङ्कट हटेको छ । तर पनि विद्युत्मा लो–भोल्टेज, पटक–पटक ट्रिपिङका कारण उत्पादनमा ह्रास आएर मूल्य बढेको छ । पूर्वाधार विकासलाई महानगरको बजेटले सम्बोधन गरेको छ । सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको जोगबनीभन्दा अलिकति उत्तरबाट बगेको नहर निमुवामा निस्कन्छ । त्यसलाई बाइपास सडक बनाएमा शहरभित्रको ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त बन्न सक्छ ।
उद्योग स्थापना गर्दा एकद्वार प्रणाली हुन जरुरी छ । उद्योग स्थापनाका लागि वन, नापी, महानगरपालिकालगायत सरकारी निकायको सिफारिश चाहिन्छ । अहिले प्रान्तीय सरकारले पनि एकद्वार प्रणालीलाई बजेटमा समावेश गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने उद्योग क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुन्छन् । खुला सिमानाका कारण रातारात धेरै सामान अवैध रूपमा भित्रिएका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहयोग गरेर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । अहिले ठूलो मात्रामा भइरहेको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुुपर्छ । यहाँको विमानस्थललाई क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउनुका साथै ‘माउण्टेन फ्लाइट’ विराटनगरबाट गराउनुपर्छ । किमाथाङ्का सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । विराटनगर चक्रपथ विकास नभएसम्म यहाँको विकास असम्भव छ । कानून र नीतिहरू ‘लिगेसी’मा निर्माण तथा निर्धारण भएका छन् । अब यस्तो परिपाटीको अन्त्य हुने हाम्रो विश्वास छ । घोषणा भएका विषय कार्यान्वयन भए विराटनगर मात्रै होइन, देश नै समृद्ध बन्ने निश्चित छ ।
स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ
उपाध्यक्ष, उद्योग सङ्गठन मोरङ
विराटनगर पहिले नेपालकै औद्योगिक नगरीका रूपमा परिचित थियो । तर, अहिले यसले आफ्नो पुरानो औद्योगिक नगरीको परिचय गुमाइरहेको महसूस भएको छ । यहाँका उद्योगी व्यापारीले अधिराज्यका सबै स्थानमा उद्योग खोल्न थालेका छन् । तर, विराटनगरमा लगाउन सकेका छैनन् । देशका ठूला उद्योगी प्रायः सबै विराटनगरकै छन् । उनीहरूले विराटनगरमा किन उद्योग लगाउन सकेनन् भन्ने विचार गर्नुपर्दछ । हामीले यहाँ फेरि औद्योगिक वातावरण तयार पार्नुपर्दछ ।
विराटनगरमा उद्योग लगाउन एउटा औद्योगिक क्षेत्रको अभाव छ । अन्य ठाउँमा उद्योग लगाउन विभिन्न प्रदूषण भयो भनेर बाधा उत्पन्न गरिन्छ । यसका लागि विराटनगरमै सेजको स्थापना गरियो भने व्यवसायीले उद्योग सञ्चालन गर्न थाल्नेछन् । व्यापार घाटा बढिरहेकाले हाम्रो स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्नुपर्दछ । यहाँ खनिज पदार्थको प्रचुर सम्भावना छ । सरकारले सेवासुविधा र पूर्वाधारमा मात्र ध्यान दिएमा बाँकी विकास र उत्पादनका काम हामी आफै गर्छौं । रेलमार्गको व्यवस्था गरेमा उत्पादित सामान देशैभर पठाउने वातावरण बन्छ । यसरी पूर्वाधार र सुविधामा सरकारले विशेष ध्यान दिने हो भने विराटनगरको विकासमा कायापलट हुन सक्छ ।
३ महीनामै सडक किन बिग्रन्छन् ?
महासचिव, मोरङ व्यापार सङ्घ
विराटनगरको विकासका लागि धेरै कार्यक्रम भइरहेका छन् । तर, अधिकांश कार्यक्रम समस्याका विषयमा मात्र केन्द्रित हुने गरेका छन् । यस्ता कार्यक्रममा किमाथाङ्का–भेलेटार–कोशीटप्पु चक्रपथ र सेजको विषय उठ्ने गरेको छ । तर, उपलब्धि शून्य छ । जनताबाट उठाइएको करको सदुपयोग गर्न ३ महीनाभित्र कुनै न कुनै योजना बनाउन सकिन्थ्यो होला नि ! ढुकुटीमा रहेको रकम खर्च गर्ने योजना नबनेसम्म र कार्यान्वयनमा नल्याएसम्म अन्तरक्रियालगायत कार्यक्रमको कुनै अर्थ छैन । विकासको छलफल फ्लाईओभर ब्रिजजस्ता विषयमा मात्र सीमित हुने गरेका छन् । सडकहरू कच्ची छन् । सडक बनाउन ठेकेदारलाई जिम्मा दिइन्छ । तर, कामको अनुगमन हुँदैन । बनेका सडक ३ महीनामै बिग्रिएका छन् । त्यसैले, सडक निरीक्षणका लागि कर तिर्ने नागरिकका तर्फबाट एउटा समूह नै परिचालन गर्नुपर्‍यो ।
भारतीय पर्यटक भित्र्याउने सरकारको मुख्य उद्देश्य
किशोर गौतम, सचिव
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश नं १
कृषिक्षेत्र महँगो भएको छ । आम कृषक कृषिमा लगानी गर्न तयार देखिँदैनन् । त्यसैले, आम कृषकमाझ सरकारी सहयोग कसरी पु¥याउने भन्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्नेछ । साथै, यस समस्या समाधान गर्न सरकारले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रको सुधार गर्न र कृषि उत्पादन बढाउन युवा नेतृत्व आवश्यक छ । साथै, कृषिको आधुनिकीकरण पनि गर्नुपर्छ । यसअनुसार प्रदेश सरकारले पनि नीतिगत रूपमा कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने प्रयास गरेको छ । अब सबै निकायले हातेमालो गरेर यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।
विराटनगरमा औद्योगिक विकासका लागि जमीनको अभाव छ । यसलाई परिपूर्ति गर्न आम उद्योगी व्यवसायीले कृषकसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । कृषकलाई उद्योगको साझेदारी बनाए उनीहरू आवश्यक जमीन दिन तयार छन् । यसरी अगाडि बढेमा कृषि र उद्योग दुवै क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनसम्बन्धी विषय समावेश गरेको छ । प्रदेश नम्बर १ का पर्यटकीय क्षेत्रलाई विकास गर्ने सरकारको उद्देश्य छ । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषय पनि पर्यटन व्यवसायीका लागि एकदमै उत्तम छ । अब त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । यसले समग्र विराटनगरको विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।
मोनो रेलको विषय स्वागतयोग्य छ
पूर्वअध्यक्ष, मोरङ व्यापार सङ्घ
हामी विगतमा भइरहेको प्रवृत्तिलाई मात्र दोहो¥याइरहेका छौं । वास्तवमा हाम्रा लागि यो विडम्बना हो । तर, पनि हामी निराश छैनौं । निजीक्षेत्रले विराटनगरमा आफ्नो तर्फबाट आवाज उठाउने काम धेरै गरेको छ । विराटनगरका व्यवसायी उद्योगपति र उद्योग वाणिज्य विभागसँग सम्बन्धित व्यक्तिले राष्ट्रको आर्थिक नीतिको कार्यक्रममा पनि ठूलो योगदान दिएका छन् । हामीले विगतमा विराट गोल्डकप खेलकुद आयोजना गर्‍यौं । यसबाट हामीले सरकारलाई निजीक्षेत्रले यस्तो काम गर्न सक्छ भन्ने देखायांै । अहिले आएको मोनो रेलको विषय वास्तव स्वागतयोग्य छ । हामी विगतमा काठमाडौंलाई घचघच्याउँथ्यौं । अहिले हाम्रो प्रदेश सरकारलाई नै भनेर विराटनगरको विकासबारे केन्द्रसम्म आवाज पु¥याउन सजिलो भएको छ । काठमाडौंपछिको राजधानी विराटनगर भनिन्थ्यो । त्यो हामी गरेर देखाउँछौं । अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने चर्चा भइरहेको छ । त्यसका लागि धावन मार्ग १५ सय मिटर बढाउनुपर्ने भनिएको छ । क्षेत्रीय विमानस्थललाई व्यवस्थित बनाउन सके विराटनगरमा पर्यटन विकास हुुने सम्भावना देखेको छु । विराटनगर पर्यटनको राम्रो सम्भावना भएको ठाउँ हो । हलेसी महादेवको मन्दिरसम्म पुग्न केबुलकार बनाउने विषय पनि उठेको छ । सरकारले पूर्वाधार तयार पारिदिनुपर्‍यो, बाँकी काम हामी गर्छौं ।
अध्यागमन कार्यालय चाहियो
सचिव, मोरङ व्यापार सङ्घ
प्रदेश नम्बर १ को मुख्यद्वार विराटनगर हो । त्यस हिसाबले पनि यहाँ एउटा अध्यागमन कार्यालय आवश्यक छ । अध्यागमन कार्यालय यहाँ नभएका कारण मैले पनि ठूलो समस्या भोग्नुपरेको थियो । विराट राजाको दरबारबारे धेरैलाई जानकारी छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुरमा आउँदा विराट राजाको दरबारबारे चर्चा गर्नुभएको थियो । यस हिसाबले यहाँ उक्त दरबार निर्माण गर्न सक्यौं भने भारतमा त्यसको प्रचारप्रसार गरेर ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सक्छौं । यसका लागि पौराणिक विषयवस्तु, कलासंस्कृति समेटेर ४–५ घण्टासम्म घुम्न सकिने दरबार बनाउनुपर्छ । विराटनगरमा व्यावसायिक प्रदर्शनीका लागि प्रदर्शनी केन्द्र छैन । यस्ता प्रदर्शनी पहिले हामी शहीद मैदानमा गथ्र्यौं । त्यो पनि खेलकुदका लागि मात्र प्रयोग हुने भएपछि व्यवस्थित तथा सुविधासम्पन्न प्रदर्शनी केन्द्र अत्यन्त आवश्यक छ । विराटनगर आएका आगन्तुकलाई घुमाउन यहाँ एउटा विविधतापूर्ण चिडियाखाना हुनुपर्‍यो । त्यसैगरी कोशीटप्पुलाई जङ्गल सफारी वा टापुलगायतको स्तरमा विकास गरेर विराटनगरबाट एक दिनको घुमफिरका लागि लैजान सकिन्छ । युवा तथा बालबालिकाका लागि रमाइलो गर्ने पार्कजस्ता ठाउँ पनि यहाँ छैनन् । काठमाडौंमा जस्तै क्यासिनो जाऊँ भन्ने पर्यटक यहाँ पनि आउन सक्छन् । तिनलाई पनि आकर्षित गर्ने सेवासुविधाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
विराटनगरको आर्थिक अवस्थालाई राम्रो मान्नुपर्छ
प्रमुख अधिकृत, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगर
विराटनगर सुकेको छैन । यहाँको विकासको गतिमात्र ढिलो भएको हो । हामीले जहिले पनि क्षेत्रगत हिसाबले हेर्नुपर्छ । आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने नराम्रो मान्नुपर्ने अवस्था छैन । पूर्वाधार विकासका काम निरन्तर अघि बढिरहेका छन् । त्यसैले, यस क्षेत्रमा हामी सुकेको भन्न मिल्दैन । अगाडि वा प्रगतितर्फ बढ्ने काम सधैं एउटै गतिमा हुँदैन । व्यापारिक क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति भइरहेको छ । त्यसैले पनि विराटनगरको आर्थिक अवस्थालाई निकै राम्रो मान्नुपर्छ । त्यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि राम्रो अवस्थामा छन् । यी क्षेत्रमा द्रुतगतिमा विकास भइरहेको छ । मेरो लामो समय अघिदेखिको अनुभवमा यहाँको व्यवसाय परम्परागत तरीकामा भइरहेको छ । हामीले अहिलेको आधुनिक चाहनाअनुसारको व्यवसाय अघि बढाउन सकेका छैनौं । विकास सरकारसँग मात्र आश गरेर हुँदैन । यसका लागि निजीक्षेत्र र सरकार सँगसँगै अघि बढ्नैपर्छ । अब विकासको बाटो सरकारले सहजीकरण गर्ने र नेतृत्व लिने निजीक्षेत्रले नै हो । प्रदेश नम्बर १ हरेक क्षेत्रमा सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । पर्यटन, कृषिजस्ता क्षेत्रमा यो प्रदेश निकै राम्रो छ । उद्योगधन्दाको त हबको रूपमै लिन सकिन्छ ।
एकीकृत भएर काम गर्नुपर्छ
प्राध्यापक, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
विराटनगरको पुनर्जागरणका सन्दर्भमा सबैभन्दा अगाडि पूर्वाधार विकास नै आउँछ । विराटनगर राजनीतिक र औद्योगिक दृष्टिले चिनिँदै आएकोमा पछिल्लो समय दुवै ओझेलमा परेको जस्तो लाग्छ । विकासका सन्दर्भमा कसरी केन्द्रीकृत भएर अगाडि बढ्ने भन्ने योजना चाहिएको छ । विराटनगरलाई माथि लैजान अब नयाँ विषयवस्तुको पनि खोजी गरिनुपर्दछ । ऐतिहासिक पक्षबाट हेर्दा विराट राजाको दरबार निर्माणलाई पनि विराटनगरको विकासको सम्भावनाको रूपमा हेरिएको छ । व्यापारिक क्षेत्रका हिसाबले भारत र चीनलाई जोड्ने किमाथाङ्का नाकालाई जोड्नेगरी काम अगाडि बढाउन सके यहाँको विकासमा सघाउ पुग्थ्यो । यी विषयमा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्मले ध्यान दिनुपर्ने देख्छु । विषयवस्तुमा एकीकृत भएर काम गर्न सकेनौं भने फेरि पछाडि परिन्छ ।
प्राथमिकताका क्षेत्रका आधारमा पर्यटनलाई विकासको पहिलो आधारका रूपमा लिन सकिन्छ । केही घण्टाको फरकमा यहाँबाट फरक फरक मौसमको वातावरणमा पुग्न सकिन्छ । सगरमाथा यहीँ छ । इलामको चिया, अदुवा आदिको प्रवद्र्धन गर्न सके यो क्षेत्रकै विकास अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
सडक सञ्जाल र अध्यागमन महत्त्वपूर्ण
मणिकुमार अर्याल, बैङ्कर
विराटनगरमा यातायात, खानेपानी, शिक्षा, मनोरञ्जनका लागि पार्क, शौचालयलगायत सुविधा भयो भने राम्रो शहरको रूपमा लिन सकिन्छ । विराटनगर एउटा लामो इतिहास भएको ठाउँ हो । भेडेटारको नमस्ते झरनाले आन्तरिक पर्यटक तानेको छ । यहाँ होटल व्यवसाय फस्टाएको छ । विभिन्न तालीम र शीपको व्यवस्था भएमा अन्य उद्योग पनि खुल्थे । विराटनगरमा खानेपानीको राम्रो व्यवस्था नभएकाले सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । यहाँ मनोरञ्जनका लागि पार्कको पनि खाँचो छ । विराटनगर प्रदेशको राजधानी भएकाले अन्तरराष्ट्रिय हवाई मार्गको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ ।
विराटनगरमा पर्यटन स्थल र धार्मिक स्थल धेरै भएकाले यहाँ धेरै पर्यटक आउने सम्भावना छ । तर, अन्तरराष्ट्रिय हवाई मार्ग नभएकाले काठमाडौंबाट आउने–जाने गर्दा खर्च बढी लाग्ने भएकाले पर्यटक आकर्षित हुन सकेका छैनन् । सरकारबाट धेरैले कृषिमा अनुदान पाएकाले फार्म खोलेर काम गरिरहेका छन् । यहाँ उत्पादित कृषिवस्तु भारतमा निर्यात गर्न सके विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्रिन्थ्यो । सरकारले विराटनगरको ऐतिहासिक मठमन्दिरको सुरक्षा र संरक्षण गर्न ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
हामीले उत्पादन बढाउनैपर्छ
नन्दकिशोर राठी, उद्योगी
विगतमा हामी धेरै कृषि सामग्री भारतमा सहजै निर्यात गर्दथ्यौं । भारतले भर्खरै उद्योगमा प्रवेश गरेको थियो । यहाँबाट कम भन्सारमा भारतमा तयारी सामान नै हामी निर्यात गर्दथ्यौं । तर, पछि विस्तारै साफ्टा, डब्ल्यूटीओको प्रवेशसँगै भारतले भन्सार बढाउँदै लग्यो । भारतले आयातभन्दा निर्यातमा जोड दिन थाल्यो । हामी निर्यातमुखीभन्दा आयातमुखी हुन थाल्यौं । हामी कच्चापदार्थ पैठारी गर्छौं । त्यो महँगो भएको छ । हाम्रो उत्पादनको मूल्य एकदमै बढेको छ । कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको आयात शुल्कमा कम्तीमा १५ प्रतिशतको फरक हुनु जरुरी छ ।
अब लामो समयपछि स्थायी सरकार आएको छ । भौतिक पूर्वाधारमा सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । सकारात्मक सन्देश त देखा परिसकेका छन् । हामीले उत्पादन बढाउन सक्नुप¥यो । पहिले हामी धानचामल निकासी गर्दथ्यौं । अहिले पैठारी गर्छौं । लामो समयदेखिको हाम्रो समस्या उद्योगका लागि जग्गाको अभाव नै हो । औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्दा–गर्दा थाकिसकेका थियौं । तर, अब प्रदेश र केन्द्र सरकारले पहल थालेको पाएको छु ।
पर्यटन प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्छ
क्याम्पस प्रमुख, साउथ एशियन टूरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेण्ट
अन्य शहरहरूले रातारात विकास गरिरहेका छन् । यो देख्दा हामीलाई डाह लाग्नुपर्ने हो । विराटनगरमा राष्ट्रवाद हुनुप¥यो । विराटनगरमा स्वास्थ्य संस्था, कृषि, पर्यटन, उद्योग सबैजसो पूर्वाधार छन् । नेपाल टुरिजम बोर्डको कामलाई अझ फराकिलो र गहन बनाउन पर्यटन प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । सरकारी कार्यालय सेवाग्राहीमैत्री छैनन् । त्यसमा सुधार हुनुपर्छ ।
सरकारी कार्यालय विकासको काम नियामक र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । जबसम्म त्यो किसिमको वातावरण बन्दैन, तबसम्म समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । समृद्धि भनेको जनतालाई सुशासन दिने हो । चाँडोभन्दा चाँडो सेवा प्रदान गर्ने हो । हाम्रो मनोवृत्तिमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । मनोवृत्ति विकास गर्ने क्रममा समाजको जति भूमिका छ, त्यति भूमिका सरकारको हुनुपर्दछ । पहिला नेपालबाट जुट, धान, चामल निर्यात हुन्थ्यो । तर, आज अर्बौंको चामल आयात गर्नुपरेको छ । नेपालले ४० खर्बकै बजेट बनाए पनि ८ खर्बभन्दा बढी खर्च हुँदैन । सडक बनाउँदा भत्काएको घर जग्गाबापत आर्थिक सहयोग नगरे पनि राहत त दिनुपथ्र्यो । विद्युत् आयात बढेको छ । मूल्यवृद्धि गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने होइन । विराटनगर महानगरपालिकाले करको दर वर्षैपिच्छे बढाएको छ । सरकार र प्रशासनको सहयोगविना हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि हुन सक्दैन । युवा उद्यमीलाई सरकारले पनि टेवा दिन सक्नुपर्छ । विराटनगरमा सबै पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि हरेक क्षेत्रको पर्यटन विकास हुनु आवश्यक छ ।
देशभर उद्योगधन्दा फैलाउन जरुरी छ
प्रबन्ध निर्देशक, चन्द्र शिव राइस मिल
विकासको अपरिहार्यता उत्पादन र निर्यात बढाउनु नै हो । हामीले माग गर्दै आएको विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भएर पूर्वाधार निर्माण र विद्युत्मा सुधार भयो भने अबको २ वर्षमा हामी धेरै वस्तु निर्यात गर्न सक्छौं । हाम्रा उद्योग शहरमुखी नै छन् । त्यसैले, अब हामी ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्दा राज्य पक्षबाट केही सहुलियतको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । अब देशभर उद्योग कलकारखाना फैलिन जरुरी छ । स्थानीय सरकारले बढाएको करका कारण मूल्यवृद्धिको सम्भावना बढेको छ । करलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्नु भएन । केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर बजेटको निर्धारण गर्नुपर्छ । यहाँका उद्योग कलकारखानालाई अघि बढाउन सहुलियतको अवधारणा ल्याउनुपर्दछ । विद्युत्को सहज आपूर्ति र पूर्वाधारको विकास गर्न सक्यौं भने हामीले थेग्न नसक्नेगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू यहाँ भित्रिनेछन् । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूलाई अब स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।
बैङ्कहरूले सहज रूपमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ
सञ्चालक, जानकी पोलिट्याङ्क
धेरै सम्भावना बोकेको छ विराटनगरले । यसको पुनरुत्थान गर्न त्यति धेरै समय र मेहनत आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्दैन । उद्योग व्यापार सहज सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति अहिले छ । त्यसैले, लगानीको उत्तम अहिलेको अवस्थामा बैङ्कहरूले सहज रूपमा ऋणप्रवाह गर्न सक्नुपर्छ ।
हामी लगानीकर्ताले ऋण लिएरै व्यापार शुरू गर्ने हो । तर, बैङ्कको ब्याजदर अत्यधिक बढेको छ । ५–६ वर्षअघिसम्म ८ प्रतिशतमा रहेको ब्याजदर अहिले बढेर १४ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसैले बैङ्ककमै ब्याजदरलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । अब हामीले मात्र २ वर्षमा यस क्षेत्रको कायापलट भएको देख्न सक्नेछौं । सबै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम आएका छन् । यसमा टेकेर सफल कार्यान्वयन हुँदै जाने हो भने हामी साँच्चै समुन्नत विराटनगरको नजीक पुग्नेछौं ।
हाम्रा लागि चाहिने कच्चा पदार्थ हामी स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । यसले थप रोजगारी सृजना हुन्छ भने हाम्रो आयस्तर पनि स्वतः बढेर जानेछ । अब आत्मनिर्भर हुने दिन त्यति टाढा छैन ।
प्रयास गरियो भने विराटनगर अनुकरणीय बन्न सक्छ
उद्योगी, देबेनरा समूह
प्रदेश १ बाह्य व्यापारका दृष्टिले मुलुककै सर्वाधिक महŒवपूर्ण छ । भारत, भुटान, बङ्गलादेश, चीन र पाकिस्तानसँग नजीक भएको १ नम्बर प्रदेशबाट वैदेशिक व्यापारको प्रशस्त सम्भावना छ । प्रदेश राजधानी विराटनगरको बृहत् परिकल्पना गरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसअनुरूपका पूर्वाधार, चक्रपथ र पर्यटकलाई तान्ने गौरव गर्नलायक संरचना बनाउन सक्नुपर्छ । जोगबनी–किमाथाङ्का रूट बनेपछि विराटनगर महानगर चीन, भारत, भुटान र बङ्गलादेशलाई जोड्ने ‘हब’ बन्न सक्छ । अहिले महानगर घोषणा भए पनि यसका लागि विकास, बाटो, बिजुली, नाला, बाल उद्यानजस्ता पूर्वाधार छैनन् । अब प्रयास गरियो भने औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्रमा विराटनगर अनुकरणीय बन्न सक्छ । त्यसका लागि कर व्यवस्थापन जस्ता विषयमा जोड दिनुपर्छ ।
विराटनगर तीन देशको ट्राञ्जिट पोइण्ट
उद्योग कलकारखानाको विकास भए मात्रै यस क्षेत्रको समग्र विकास हुने हो । विराटनगर तीन देशको ट्राञ्जिट पोइण्ट हो । यसैले, हामी यो क्षेत्रबाट राम्रोसँग व्यापार प्रवद्र्धन गर्न सक्छौं । भौतिक पूर्वाधारको विकास, वैज्ञानिक शहरीकरणका माध्यमबाट जनतालाई सुविधा दिन सक्नु नै हाम्रो विकास हो । तर, पछिल्लो २ वर्षमा जति विकास हुनुपर्दथ्यो, त्यति हुन नसकेको देखिन्छ । नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि वातावरण बनाउनु प¥यो । विद्युत्को सहज आपूर्ति छ भनेर आह्वान गर्नुप¥यो । लोडशेडिङ हट्यो भनिएको छ । तर केही सुधार मात्र भएको छ । पूर्ण हटिनसकेको स्थिति छ । मुख्यगरी हामीले पर्यटन तथा कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । योजना आउँछन्, बजेट पनि विनियोजन हुन्छ । तर, खोइ कार्यान्वयन ? हाम्रो सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको नै बजेट कार्यान्वयन नहुनु हो । निर्वाचनपूर्व आएका सबै घोषणापत्रको कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । हाम्रा स्रोतहरूको हामीले सफल कार्यान्वयन गरेर अघि बढे हामी सबैभन्दा धनी र समुुन्नत प्रदेश बन्नेछौं ।
बैङ्क ब्याजदरले गाह्रो पर्‍यो
सदस्य, मोरङ व्यापार सङ्घ
भैतिक संरचना र नीति निर्माणमा सरकारकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । यो दुईटाले गर्दा हामीलाई धेरै कुरामा फरक पर्छ । त्यसैले, निजीक्षेत्रले जति नै प्रयास गरे पनि सरकारको नीतिले सहयोग भएन भने हामीलाई काम गर्न असजिलो हुन्छ । हाम्रो समस्या भनेको नै मानवीय स्रोत हो । विकासका चर्चा भए पनि काम शुरू कहिलेदेखि हुन्छ भन्नेमा अलमल छ । विमानस्थलको विस्तार गर्ने कुरा आएको छ । पहाडी क्षेत्रको उडान प्रादेशिक रूपमा मात्र नभई क्षेत्रीय हिसाबमा होस् । विराटनगरबाट उडान हुने हो भने काठमाडौंमा मात्र हुने भार पनि कम हुन्छ र अन्य क्षेत्रको पनि विकास हुन्छ । अध्यागमन नभएकाले धेरै मानिसले दुःख पाइरहेका छन् । अध्यागमन निकै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यसको समस्या सुल्झाउनु आवश्यक छ ।
अहिले बैङ्क ब्याजको विषय आइरहेको छ । अहिले ब्याजदर १२–१३ प्रतिशत बनिसक्यो । यो ब्याजलाई हामीले कसरी मिलाउने ? तुरुन्तै हामीले केही गर्न सक्दैनौं । किनभने, हाम्रो त दीर्घकालीन लगानी हो । जग्गाको भाउ निकै बढिसकेको छ । जग्गामा उद्योग लगाउन पनि निकै गाह्रो ।
जलविद्युत्को विकासबाट प्रदेशको आर्थिक समृद्धि
‘नयाँ नेपाल निर्माणको आधार, देशमा ऊर्जाको विकास आधुनिक भौतिक पूर्वाधार’ नारालाई आर्थिक विकासको शुत्रधार बनाएर अब अघि बढ्ने बेला भएको छ । विकसित भौतिक पूर्वाधारविना नयाँ नेपालको सपना पूरा हुन सक्दैन । जलस्रोत र जलविद्युत्को विकासलाई नेपाल निर्माणको प्रमुख आधार बनाउनेतर्फ लाग्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । विगतमा जलविद्युत्को विकासमा ध्यान पुर्‍याउन सकिएन । त्यति बेलाको गैरजिम्मेवारीका कारण हामीले धेरै समस्या भोग्नुप¥यो । अब जलविद्युत्को विकासमा ध्यान दिनुपर्ने समय आइसकेको छ ।
प्रदेश नम्बर १ अपार सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । यहाँ रहेका स्रोतहरूलाई सदुपयोग गरेर विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके प्रदेशको समृद्धिमा टेवा पुग्न सक्छ । यहाँ रहेका उद्योगहरूले भोग्दै आएको ऊर्जा सङ्कट समाधान गरी बढी भएको विद्युत् भारत/बङ्गलादेशतर्फ निर्यातको सम्भावना छ । प्रयाप्त ऊर्जा भएमा देशी–विदेशी उद्योगीले पनि आफ्नो उद्योग यही प्रदेशमा स्थापना गर्न रुचि लिनेछन् । त्यसले रोजगारीको सृजना मात्र नभई प्रदेशको समग्र आर्थिक पाटामा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
विद्युत् ऊर्जाको प्रयोगले नेपालीको आर्थिकस्तर बढाउन टेवा पुग्छ । साथै, विदेशी लगानी भित्र्याएर ठूला आयोजनाको निर्माण भए विद्युत् व्यापारबाटै उल्लेख्य प्रगति हासिल हुन सक्छ । यसैगरी विद्युत्को अभावका कारण केही वर्षदेखि थला परेको नेपाली उद्योगधन्दालाई पुनर्जीवन दिलाउन सकिन्छ । विद्युत्को अपेक्षित विकास नहुनुमा हाम्रो सोच र नीतिहरूमा रहेको गम्भीर त्रुटि हो । यसलाई सच्याउनेतर्फ अबको मुख्य एजेण्डा हुनुपर्छ । इमानदारीपूर्वक प्रयास भएमा ५–७ वर्षभित्रै विद्युत् क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । जलविद्युत्प्रति राष्ट्रले देखाएको अग्रसरता र चासोकै कारण अहिले धेरै आयोजनामा विदेशी–स्वदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ ।
यी प्रयासले सार्थक आकार ग्रहण गरेमा निश्चिय नै नेपालले नयाँँ स्वरूप पाउन सक्छ । विद्युत्को विकासले मोनो रेलदेखि केबलकारको सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विद्युतीय सामग्रीको उत्पादन सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर १ मै छ, जहाँ तारका सात, विद्युतीय स्वीचका दुई र आधुनिक पेनल बोर्डको एउटा उद्योग छ । साथै, छिमेकी राष्ट्रहरू भारत, बङ्गलादेश, चीन र भुटान पनि प्रदेश नम्बर १ बाट नजीकै रहेकाले उत्पादित सामग्री निर्यात गर्न सजिलो र सस्तो पर्छ । यसले प्रदेश नम्बर १ लाई समृद्ध बनाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
जोगबनी गएर नेपालको सामान किन किन्ने ?
क्रिष्टल कञ्चनजङ्गा सेक्युरिटिज प्रालि, विराटनगर
हामीजस्ता युवालाई विराटनगरले समेटेर अघि बढ्न सकेको छैन । विराटनगर मात्र होइन, कुनै पनि ठाउँको विकासका लागि युवा नै अघि आउनुपर्छ । देशको विकास हुन ठाउँ ठाउँको विकास हुनुप¥यो । यसका लागि सरकारले युवाहरूलाई रोजगारको अवसर दिनुपर्‍यो ।
युवालाई शीपमूलक तालीमको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अर्को, विराटनगरमा फोहोरको व्यवस्थापन हुनुप¥यो । हामीहरू जति नै ठूलो महल बनाएर बसे पनि घरअगाडि फोहोरको थुप्रो छ भने सभ्य मानिँदैन । विराटनगरमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भिœयाउन पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्न एकदमै जरुरी छ । त्यस्तै, हाम्रो नेपालमा उत्पादन भएको सामग्री भारतमा गएर विक्री भएको छ । हामी जोगबनी जान्छौं, नेपालमा उत्पादित सामग्री किनेर ल्याउँछौं । यो क्रम रोकिनुपर्‍यो ।
‘एक घर, एक बैङ्क’ नारा सफल पारौं
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सृजना फाइनान्स
हामीले पुनर्जागरण वा पुनरुत्थान कुन विषयमा छलफल गर्न खोजका हौं, स्पष्ट हुन जरुरी छ । नीति वा कुनै पनि कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने कुनै उपलब्धि हुँदैन । अहिलेसम्म हाम्रोमा देखिएको समस्या कार्यान्वयनमै हो, जसले गर्दा हामी पछाडि परिरहेका छौं । नीतिगत विषयमा सबैले आ–आफ्नो पाटो हेरेर अघि बढिरहेका छन् । सरकारले आफ्नो मन्त्रालय खोलेर आफ्नो पसल सञ्चालन गरेको छ । हामी निजीक्षेत्रले पनि आ–आफ्नो पसल खोलेका छौं, तर समन्वयकर्ता भने कोही पनि छैन ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ‘उत्पादन गरौं, प्रदेश सक्रिय बनाऔं’ नाराका साथ अघि बढेको छ । यो अवस्थामा उत्पादनलाई मात्र जोड दिइयो भने पछाडि परिन्छ । त्यस कारण सरकारले बजार खोजिदिने काम गर्नुपर्छ र बजार मागअनुरूप उत्पादन गर्न लगाउनुपर्छ । अहिलेसम्म हामी पहिले उत्पादन गर्ने अनि बजार खोज्ने गरिरहेका छौं । यसमा परिवर्तन ल्याउनैपर्छ । सबै क्षेत्र र वर्गलाई बैङ्किङ पहुँचमा ल्याउन हामी लागिपरेका छौं । अहिले सरकारले शुरू गरेको ‘एक घर, एक बैङ्क खाता’ अभियानमा सबैको सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरेको छु ।